Plum Voloshka: foto na nkọwa nke ụdị, nlekọta, ọgụ megide oria na pests - Ugbo - 2020
O siri ike ịchọta ogige nke ahihia na-agaghị eto - ọmarịcha omenala ubi na mkpụrụ osisi dị ụtọ ma dị mma.
N'ihi ịrụ ọrụ na-adịghị agwụ agwụ nke ndị ọrụ ubi, ụdị dịgasị iche iche na-amụba kwa afọ na onye na-elekọta ubi nwere ike ịhọrọ ụdị ihe ndị kachasị amasị ya.
Ee, na inweta ha abughizi nsogbu - nke a naputa site na ebe o bula, osisi ma na-eto eto maka ahuike.
Ịgbara na fatịlaịza
Plum Voloshka: nkọwa nke ọtụtụ
Voloshka - mbubreyo ọtụtụ plum ripening ke ufọt ufọt September.
Osisi ahụ nwere ike dị ukwuu, okpueze mara mma, dị ka a ga - asị na ọ bụ site na ntanaka ụmụaka, gbaa gburugburu, ya na nkpuka nke alaka ya, nke a na-ejupụta na okooko osisi ọcha na mmiri na nnukwu mkpụrụ osisi anụnụ anụnụ na ọdịda.
Ọ bụ na-acha anụnụ anụnụ, ọ bụghị n'ihi na ihe ọ bụla na aha "Voloshka" sụgharịrị ịbụ "cornflower".
Ọdịiche dị iche iche dịka nnukwu-fruited., na-acha anụnụ anụnụ na mkpuchi siri ike, mgbe ụfọdụ, obere ugbo ma ọ bụ nke na-eme ka ihe dị ka gram iri ise, mkpụrụ osisi nke nwere ụdị mmiri ahụ nwere nnukwu ogwu miri emi, nke dị omimi na-eme ka ọ dị mfe imebi ha.
Nkume a na-adị mfe ma ọ bụ gbaa gburugburu., dika nkpuru ahu. Nri nke Voloshka plum dị iche iche dị mma, odo na aka nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. na pulp dị oke, na-atọ ụtọ, na-atọ ụtọ na obi ụtọ ụtọ.
Nnukwu mkpụrụ - ruo na kilogram iri ise site na osisi, na-abanye n'ime mmezi afọ nke ise mgbe ị rutesịrị.
Ụdị dịgasị iche iche bụ nke na-adịghị emerụ onwe ya. Nkeji oge oyi hardiness.
Enwere ike ịhụ ọtụtụ ụdị Voloshka plum na foto dị n'okpuru:
Ngwongwo di iche iche Voloshka bụ ụdị ngwakọ nke iche Hungarian Italian na Big Blue. A mụrụ ngwakọ a na Ukraine na obodo Mlievsk na Ụlọ Ọrụ Nyocha. L.P. Simirenko, abanye n'Ala Nchịkwa State na 1997 maka mpaghara North Caucasus.
Ngwurugwu nke ihe ubi na-agụnye: Hungary Korneevskaya, Ebe nchekwa nke Timiryazev, Bogatyrskaya, Siny Dar, Anna Shpet.
Ọ bụrụ na ụdị dị iche iche Voloshka nwere mmasị gị, anaghị azụta seedlings site na ndị mmadụ, ọ bụrụ na plums anaghị eto eto n'ógbè gị, lelee pollinator iche.
Ọbụna samoplodnye iche na-amị mkpụrụ dị mma ma ọ bụrụ na plums ndị ọzọ iche-eto n'akụkụ, Voloshka, Otú ọ dị, bụ fọrọ nke nta fruitless na-enweghị n'elu-pollination.
Mkpụrụ osisi na-agbanye mgbọrọgwụ nke ọma karị, ma ọ bụrụ na ha erughị afọ abụọ - osisi toro eto bụ, ọ ga-esiri ya ike gbanye mgbọrọgwụ n'ebe ọhụrụ.
A na-achọputa na n'ime osisi ochie ndị dị n'ubi, dị iche iche ọtụtụ iche iche, na-akụ na kọmpat, na ọbụna osisi ole na ole na-eto nso. N'ebe ndị isi ụmụnna na-agba ntụ, a na-achọkwa cherry - dịka ilekọta osisi ndị a yiri.
Osisi niile na-acho ala ndi na-eme nri, na ike anyi ime ka ndi mmadu ghara inwe ike. Na ìhè anyanwụ zuru oke, mkpụrụ osisi ahụ ga-abụ ihe dị ịrịba ama, mma ventilashị na-egbochi mmepe nke ọrịa ọrịa.
Ya mere a gha etinye osisi buru ibu na etiti oge nke atọ na mita anọ n'usoro na site na ise na isii mita n'etiti ahịrị. Otutu nke fossa nke akuku na-adabere n'ogo nke mkpụrụ osisi ahụ, ibu osisi ahụ, nnukwu olulu dị na dayameta na omimi.
Isi ọnọdụ - ntinye aka nke mgbọrọgwụ na ntinye kwesịrị ekwesị nke olu akwa. Maka afọ abụọ, otu oghere 80 site na 80 cm na omimi nke ruo mita mita ga-ezu.
Osimiri kwesịrị ijupụta na humus, ihe dị ka otu ma ọ bụ abụọ bọket, tinye okpukpu abụọ ma ọ bụ atọ nke superphosphate, obere ntụ ọka salts, nkedo nke osisi ash ma gbakọta ihe niile.
Tinye sapling na ezumike, dị ka nha nke mgbọrọgwụ, ma na-ehi ụra, na-azọcha ala iji zere nhazi nke ọdịda. Lezienụ anya na ọkwá mgbọrọgwụ ahụ, ọ gaghị eli ya.
Na-esote seedling ịkwesịrị idebe kọlụm osisi maka garter nke seedling, peg ekwesịghị igbochi seedling na-eto eto na garter kwesịrị free. A na-edozi ala ala nke dị na nsọtụ nke gburugburu ahụ; mmiri ekwesịghị ịba mgbe a na-ehichapụ ya. Mgbe a na-akụ ihe na-ebu 2-3 bọket mmiri ga-achọrọ, a na-agba gburugburu gburugburu nke azu.
Ugbua site na mgbụsị akwụkwọ nke afọ mbụ mgbe ọ kụrụ ya ga-ahụ n'ụzọ doro anya otú ntụsara ahụ si dị mma, gịnị bụ uto ha?
Ọ bụrụ na ndị seedlings abịakwute gị na ọdịda, ọ ka mma ịkwụsị akuku ruo oge opupu ihe ubi, ma kụọ osisi ndị ahụ n'olulu na-emighị emi na mgbọrọgwụ, na-eme obere mgbidi earthen, na-ahapụ akụkụ ala nke osisi ahụ n'ogo nke ogo 45 n'elu ala. Snow na-echebe ndị na-esi na friza.
Ndị na-eto eto kwesịrị ilebara anya mgbe niile, ala ekwesịghị ikpochapụ, ị ga-agbanyekwu mmiri na ịgha mkpụrụ.
Ọ bụ ezie na a naghị eme ka mkpụrụ osisi ahụ ghara ịkọ, a ga-akụ mkpụrụ osisi ahụ na strawberries ma ọ bụ akụ ya na mkpo, ha na-eme ka ala dị na nitrogen, ma n'okpuru akwụkwọ nri ndị dị mkpa bụ ezigbo akwa. Ma, ị gaghị akụ ogologo osisi, ha ga-ndò ndị seedlings.
Tupu ịmalite ịmị mkpụrụ, ọ ka mma igwu ala dị nso, na-ewebata nri.
A na-emepụta fertilizing na nri ndị na-emepụta nri otu ugboro n'afọ atọ ọ bụla, a na-etinyekwa nri ịnweta ịnweta kwa afọ.
Ụlọ ọrụ anyị na-emepụta nri ịnweta ịnweta ihe dị iche iche dị iche iche nke arụ ọrụ.
Jiri nlezianya na-agụ ntụziaka ahụ, ọ gaghị esiri ike ịhọrọ ihe ndị dị mkpa, na usoro onunu ọ bụla na-akọwa kpọmkwem.
Na mmalite nke mkpụrụ osisi, ọ na-adịrị mma iji tụọ ala n'ala ahụ na-ejikọta ahịhịa, na-edochi weeding site na ịcha ahihia.
Tinyere ahịhịa, a na-amị mkpụrụ na-eto eto, nke osisi ahụ na-ejupụta ebe niile gburugburu ya.
Ọ bụrụ na okpomọkụ ọkọchị, a ghaghị ịṅụ mmiri ọkụ tupu oge okooko, mgbe okooko na mgbe owuwe ihe ubi gasịrị. Nwa osisi na-achọ mmiri dị 2 ma ọ bụ 3, nakwa maka onye toro eto 4 ma ọ bụ 6, ọ na-adaba iji jikọta mmiri na-edozi ahụ.
A na-ebuchachaa oge ịmalite ịmị mkpụrụ osisi na-esote mmiri mgbe ọ kụrụ - nhazi nke osisi ahụ amalite. Mgbe eriri abanye n'ime osisi a na-emepụta mkpụrụ osisi, ma a ghaghị ịchachaa ihe ọcha kwa afọ.
Ekwula okpuezeNke a na - eduga n'ịgbatị alaka na ibelata mkpụrụ maka nke a.
Na oyi, na elele anya mbụ, ọ dịghị ihe ọ bụla ị ga-eme n'ubi ahụ, nọrọ n'ụlọ, chere maka mmiri. Onye ọ bụla nke na-eche na nke ahụ bụ ugha, osisi na-ehi ụra n'okpuru snow, na ihe ọjọọ na-eto eto na-eto eto bụ ụmụ oke, anaghị ehi ụra.
N'okpuru snow, ọ na-adịrị ha mfe ịbanye n'ime ogbugbo ndị na-eto eto ma na-agba snow gburugburu ogwe ahụ nwere ike igbochi ha. Enwere ike izere ihe omume a ma ọ bụrụ na ị na-ejikọta kporo na ọdịda na ihe siri ike na aka.
Na oge opupu ihe ubi, n'okpuru ọkụ na-ekpo ọkụ, osisi na-eteta, ha na ụmụ ahụhụ na-eme ka ha dịkwuo mma. A ga-ebu ụzọ wụnye ụmụ ahụhụ iji kpoo okooko osisi, nke abụọ mgbe okooko.
A na-eji osisi pọmbụ Bordeaux emepụta kwa afọ, na otu ugboro n'afọ ọ bụla - na 3% Nitrafen ngwọta.
Nnụnụ na-egosi na ọ dịghị mmasị na plums, na-efe efe na-agagharị na nnọkọ, nke na-eme ka ọrụ nke onye na-elekọta ubi rụọ ọrụ dị ukwuu.
Dịgasị iche iche piom "Voloshka" ripens ke ufọt ufọt September. Site n'iwe ihe ubi ịkwesịrị ịkwadebe tupu oge eruo, owuwe ihe ubi nke osisi osisi, na nkezi, ihe dịka kilogram 50, ị chọrọ akpa na a ga-achọ ọkwa.
N'osisi dị otú ahụ site na ala ị naghị eburu ọtụtụ, naanị ị na-agbaji alaka, na nke a bụ ihe na-adịghị anakwere.
Varoshka dịgasị iche iche nke ụwa, mkpụrụ osisi dị mma ma dị mma.
Ndị na-akụ ubi nke kụrụ osisi a na-acha anụnụ anụnụ na-atụghị anya - Voloshka dị mma ma dịka okpokoro dịgasị iche iche na maka blanks dị ka jams, compotes na jams, ọ na-eguzogide ọgwụ dị egwu na-adịghị ata ahụhụ n'ọbara.
Naanị ihe a na-ekwesịghị ichefu bụ nnukwu nnukwu osisi ahụ, nke dị elu karịa plums nke ọtụtụ ụdị ndị ọzọ a ma ama.